Uhlelo ukudala amafonti. ifonti ezinhle. Ukudala ifonti wokubhala kwakho
Readability noma iluphi uvivinyo lube ngokuvamile kakhulu degree sezingeni eliphezulu kunqunywa ifonti, esetshenziselwa ukubhale phansi. Abasebenzisi abaningi ungafuni ukwaneliswa yilokho sipho yesimanje umbhalo abahleli, bese uzama ukudala amafonti zakho siqu. Nokho, kule nqubo kunezinkinga eziningi, uma kungekhona ukuba acabangele amanye amaphuzu abalulekile. Dala ifonti akho amahle akulula njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Ngakho-ke, sizama sicabangele ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ezihlobene nale umsebenzi oyisicefe.
Kanjani ukwakha font enhle: ekwakhiweni inkinga
Okokuqala, ngendlela efanele usaqala lokuzinqumela, kufanele usibhekise ngokucacileyo ilitshe main. Ingabe ifonti wadala lezincwadi zezemfundo, ngoba amahlaya noma amaphrojekthi ukuzijabulisa - lokhu kakhulu inquma izigaba eziyinhloko zomsebenzi.
Okulandelayo, kufanele unqume ukuthi kufanele babukeka adalwe ifonti ukulingana uma kuwumsebenzi esizayo (sans-serif, serif ifonti, izinhlamvu kanye geometry lesifanele, ekugcineni, kungakhathaliseki ifonti kusekelwe ngesandla sakhe umklami siqu) kahle kanjani uyobheka kumadokhumenti eside hhayi kuphela izihloko zezindaba.
Ngokwemvelo, kufanele kuphawulwe, njengoba zinhlamvu zibukeke okucatshangelwayo ngaphansi isikhulisi. Futhi banake lwetheksthi lonke idokhumenti. Yiqiniso, kungase kusetshenziswe noma iyiphi uhlelo elula ukushintsha ifonti ye-ekhona, kodwa ochwepheshe abaningi musa batusa ukuthatha njengesisekelo nezinye amafonti, ngoba uma ufuna ukufeza okwakhe, la mathuluzi ayifanele umsebenzi (ngaphandle mhlawumbe ngenxa ukuqonda ayisisekelo ukuhlela).
Ukudala ilitha oqoshiwe kubhekwa nzima, ngakho-ke, ukuqala ukwenza iskripthi kangcono. Uhlelo ukwakha font wokubhala kwakho ingasetshenziswa ezigabeni kamuva, kodwa ekuqaleni kutuswa udwebe izinhlamvu eziningi ngesandla, bese kuzo ngandlela-thile inhlanganisela futhi ubone ukuthi izobukeka Imibandela.
Le ndlela ivumela ukuba ngokushesha ukuhlola eziningi ngamaphutha, ngoba lwembhalo lungentiwa ucace kakhulu futhi ngabanye kakhulu, futhi akubona bonke abafundi esizayo uzokwazi ukufunda imibhalo-ke. Ukufundwa ungakhululekile umane ibenze umfundi ezingaba khona.
Endabeni elula, ungakwazi ngisho nje ukuthatha izithombe izinhlamvu, bese wabo ezakha igama noma inhlanganisela (ikhompyutha noma ngesandla kusuka izithombe zemvelo).
ama-computer nemishini ukudala amafonti ukwenza ihlelo akazange ngokushesha kudingeka. Qala ngokwakha ezimbili amakhowe ekukholakala ukuthi izinhlamvu main. Lokhu - ezincane izinhlamvu «n» futhi «o», futhi engenhla - «O» futhi «H».
Abanye ochwepheshe emkhakheni ukutusa ukusetshenziswa inhlanganisela «adhension» (noma «adhencion»). Kukholakala ukuthi ukudalwa kwe ukulandelana kwezinhlamvu lezi zinhlamvu ngesandla ekuqaleni ukuthuthukiswa ifonti esizayo ikuvumela ukuba ngokugcwele geometry kanye olinganise ngamunye izinhlamvu, izinombolo noma izimpawu.
Esikhathini esizayo, kuyoba lula umsebenzi ngokudweba izinhlamvu kakade uhlelo lwekhompyutha. Kodwa ekuqaleni kungcono ukudweba ngesandla, ngoba ngaphandle kolwazi ezinye kukhompyutha ukudala imigqa bushelelezi noma ukuhwebelana ngeke neze eziyinkinga.
Uhlelo ukudala amafonti: nokudluliswa ifonti kukhompyutha
Kodwa ake sithi, iqoqo wefonti, futhi ngenkathi ezinye ohlelweni oluthile ukwakha font wesandla alisetshenziswa. Isinyathelo esilandelayo sizobe ukudlulisa ifonti imvelo ikhompyutha. Akubuzwa, lokhu kuzodinga isithwebuli kanti isofthiwe efanele.
Futhi le njongo ungasebenzisa ezihlukahlukene izicelo, kepha bonke labo ababhekene nezimo ezifanayo amaphasela software bavame ukuncoma ukusetshenziswa Adobe Illustrator - isofthiwe, jikelele kuzo zonke izici. Kungcono yokuqala edonswe edonswe kulezo izinhlamvu ukupenda umaka ezicacile, kanye nesinye futhi wenze edging ipeni bushelelezi bobunjwa.
Kodwa akubona bonke Abaklami luthela babe izandla on isipiliyoni nalesi sicelo, njengoba uhlelo Wabasaqalayo kubhekwa ngempela nzima master. Ngakho-ke, izinga ephelele, nakuba ayengazi isicelo esisha esibizwa FontLab Studio.
Naphezu lokuphelelwa yisikhathi yayo ezinye, uhlelo lokusebenza likwazi arsenal yayo eziningi professional-level amamojuli, kuhlanganise umdwebo amathuluzi Bizet Viewer glyph e Ubukhulu ezimbili, hhayi kuphela e-ezindizeni ovundlile, zonke izinhlobo converters othomathikhi bese ifonti ukuhlanganisa izimali. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo isofthiwe isekela iningi ifonti nezakhiwo eyaziwa (TrueType, ASCII Unix, Vula TrueType, Mac TrueType), kanye nentuthuko wadala ngokusebenzisa okufanayo-Adobe Illustrator ifomethi: BMP, AI, TIFF, EPS, nabanye.
Uma ungafuni dweba ukuze ...
Kulesi simo, Umbuso indawo umsebenzisi BirdFont ukulingana kahle - uhlelo encane ukwakha font akho, njengoba besho, kusuka ekuqaleni.
Naphezu alula, uhlelo lokusebenza kuyinto yamathuluzi okukhulu, okungase kuqashelwe eceleni ngokudweba izinhlamvu noma izinhlamvu ireferensi igridi weJiyomethri, ukudalwa glyph phezu izithombe ezikhona ukuguqula ngokuzenzakalelayo izimpawu zibe ifomu vector, sithuthukiswe yokungenisa amafonti bese wengeza imethadatha.
Uma ufuna ukwenza iphrojekthi esekelwe wesandla sakho siqu, ungakwazi iphendukele ngosizo FontCreator isicelo. Uhlelo kulula ukufunda futhi banethuba okuhle, hhayi nje ukwakha, kodwa futhi ukuze avivinye amafonti, ngisho lapho kukhulunywa standard PCI-ikhibhodi nge izakhiwo ezahlukene.
Ekugcineni, ifonti wadala futhi kusetshenzwe ukusetshenziswa eminye. In the isinyathelo esilandelayo, okokuqala kufanele sinake indlela balingisi uyobheka ngegama elilodwa lokuthi, umugqa, isigaba noma umbhalo ogcwele ngokuya efundeka yayo.
Futhi, kufanele sizame ukuba ushintshe usayizi wombhalo, futhi ukuhlola kahle indlela okubukeka ezinguqulweni ezihlukahlukene uyakekela. Cishe bonke izinhlelo ngokudala amafonti ukuthi lawa amakhono, kodwa kungcono nje uzitholele umbhalo ubone mathupha lokhu. Ishidi ne umbhalo ophrintiwe letingemasayizi lahlukene kungenziwa elenga odongeni ulubheke kude noma eduze, ukuhlaziya amaphutha. Enye efiselekayo ukuthumela ezinye nomndeni umbhalo noma abangane, ukuze bakwazi ukuhlola umsebenzi, njengoba umbhali, njengoba umthetho, khona baneHholo, umbono nje siqu kanye nombono wenza.
Isiphi isimiso okufanele ngiyisebenzise?
It uhlala manje ukubheka uhlelo ethandwa kakhulu ngokudala amafonti, okuyizinto ikakhulukazi Abaklami esetshenziswa nezobuchwepheshe, kanye nabasebenzisi abavamile. Phakathi zonke ezihlukahlukene, manje okuyinto ahlinzekwa emakethe computer nobuchwepheshe, eceleni uzinake mikhiqizo isofthiwe:
Thayipha umhleli ifonti 3.2;
Kulesi uhlu ungathola uhlelo ukwakha font e Izinsiza isiRashiya, free futhi wakhokha. Yebo, futhi amathuba bayehluka ngempela kakhulu. Ngakho kufanele akhethe esekelwe endabeni yezakhi yabo, izidingo noma ukuhlolwa kwezicelo emsebenzini wabo.
Njengoba kungaqondakala kusukela ngenhla, inqubo yokudala ifonti akho ngakolunye uhlangothi kubukeka lilula (usebenzisa isofthiwe), futhi ngakolunye - kudinga izenzo fantasy nokubekezela. Lapha, ngokukhethekile, ukugcizelela wabekwa ekuthuthukiseni ifonti akho, kunokuba ngokuphatha kakade ekhona, njengoba indlela yokudala phezu ingxenye umklami ubukeka ezithakazelisayo ezingaphezu kuka yokukopisha into efana nalokho, ukuthi kwaba njalo. Sethemba, lawa mathiphu alula kuzosiza bonke imfundamakhwela ukuqonda zonke izigaba ekuthuthukiseni imiklamo yabo. Nokho, uhlelo ngokudala amafonti - kukuwe wesibili. Into esemqoka - umbono yokuqala umdali, ngomqondo ongokomfanekiso, indlela yokudala ekuxazululeni inkinga. Futhi lokhu, njengoba sazi, is wamukela kwasekuqaleni.
Lunye komugqa umkhiqizo
Mantis-nezimfanzi: isithombe, amandla nomthelela
Iminithi yokudweba: indlela yokubeka imfashini ku-Minecraft
Indlela ukubuyisela isimiso sezinzwa?
I Mashi apula: incazelo, isivuno, ukubuyekezwa
Kanjani ukuheha inhlanhla?
Cashews: ikhalori, ukunambitheka kanye nezinzuzo